BBC Learning English - Course: Essential English Afaan Oromoo / Unit 1 / Session 6 / Activity 1
Namni wayii gaahila godhachuu isaa/ishee akkaataa itti gaafatamu hubachuuf caqasi.
Listen to the audio and take the quiz. Sagalee kana caqasiitii qorami.
Yooyyaa! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baruu kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan siif dhiheessu, gara Essential English Conversation, baga nagaan dhufte. Ani Ammayyuudha. Kutaa kana keessatti namoonni gaahila godhachuusaanii akkaataa ittiin gaafatan ni baratta.
Namoonni lama gaa’ila godhachuusaanii yeroo walgaafatan caqasi.
Hubachuuf yoo si rakkise, hinyaadda’in; shaakaluuf akka sigargaaru haasawicha addaan qoodna.
Suun Jalqaba, ‘are you married?’ ‘gaa’ila godhatteettaa/fuutettaa?’ jechuun Maark gaafatte. Kuni gaaffii namni eyyee ykn lakki jedhee deebisuuti; jechuunis deebiin isaa ‘eyyee’ ykn ‘lakki’ ta’a. Gaalicha caqasiiti irra-deebi’i.
‘No, I’m not,’ ‘Lakki ani hinfuune’ jedhe Maark. Achiimmoo ‘But I’m engaged’ ‘Garuu, kaadhimmadheeraa’ jedhe.
Haala irra jirtuurratti hundooftee ‘I’m single’ ‘ani qeerroodha’, ‘I have a partner’ ‘kaadhimaa/jaalallee qaba’ yookaan immoo ‘I’m divorced’ ‘hiikeera’ jechuullee dandeessa. Kan ittaanu caqasi.
Achii Maark gaaffii itti aanu gaafate. ‘How about you?’ ‘atihoo?’ Gaaffii walfakkaataa nama biraa gaafachuuf gaaffii akkasii fayyadamna. Gaalicha caqasiiti irra deebi’i.
Suun deebii eeyyee yookiin lakki jedhuun Maarkiif deebiste. ‘Yes, I am’ ‘Eeyyee ani heerumeera’ jette. Gaalicha caqasiiti irra-deebi’i.
Dansa. Amma namoonni adda addaa waa’ee bultii ijaarrachuu isaanii yeroo walgaafatan caqasiitii isa ati jette waliin walbira qabii mirkaneeffadhu.
Gaariidha! Afaan Ingilizii hangam akka yaadattu haa ilaallu. Himoota Afaan Oromootiin caqasiiti Afaan Ingiliziin maal akka ta’an dubbadhu.
Lakkii ani gaa’ila hingodhanne garuu kaadhimmadheera.
Eeyyee, Ani gaa’ila godhadheera.
Gaariidha, ammammoo waantoota ijoo har’a baranne dhaggeeffachuuf guutummaa haasawichaa irra-deebi’ii caqasi.
Baay’ee Gaariidha! Amma Afaan Ingiliziin namoonni bultii ijaarrachuu/gaa’ila godhachuu isaanii gaafachuu fi gaaffiiwwan eeyyee ykn lakki jechuun deebifaman deebisuu dandeessa. Waan hanga yoonaatti baratte shaakaluu akka hin daganne. Hiriyyaa barbaadiiti fuudhuu isaa ykn heerumuu ishee Afaan ingiliziin gaafadhu. Akkasumas ‘How about you?’ jechuun gaaffii walfakkaataa deebistee gaafachuu hindagatin.
Jechoota tartiiba sirriin kaa’uun waan baratte mirkaneeffadhu.
Jechoota tartiiba sirrii ta’en tarreessi.
'Are' jecha jalqabaa.
'not' jecha xumuraa.
'am' jecha xumuraa.
'single' jecha jalqabaa.
Lakki, ani gaahila hingodhanne.
Eeyyee, ani gaahila godhadheera.
Ani gaahila godhadheera.